Ngawaphi amaQhinga aPhezulu amaQonga e-SaaS okuKhula | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 24, 2019 NgoLwesithathu, Julayi 24, 2019 UChloe Smith
Ithini inombolo yakho ekugxilwe kuyo njengenkampani ye-SaaS? Ukukhula, kunjalo. Impumelelo ye-Skyrocketing kulindeleke kuwe. Kubalulekile ukuba usinde ixesha elide:
Nokuba inkampani yesoftware ikhula nge-60% ngonyaka, amathuba ayo okuba sisigidi sezigidi zeedola angcono kune-50/50.
McKinsey kunye neNkampani, Khula ngokukhawuleza okanye ufe kancinci
Ukukhula kwenyanga ngaphezulu kwenyanga kubalulekile ekuhlawuleni ilahleko ezivela kwiinkampani ze-SaaS ngokubanzi. Ukubetha ulindelo kunye nokukugcina uhlaza, lixesha lokuba ubuchule bakho busetelwe ukukhula ngo-2019. Kusoloko kukho izicwangciso ezitsha ezivelayo, amaqhinga okukhula okukhula, kunye nezixhobo zokukunceda ukhulise ukukhula kwakho.
Iindlela zokuKhula zeSawaS
Nazi iindlela ezimbalwa zokukhulisa ukukhula kweSoftware njengeeNkonzo (SaaS) zamaqonga.
Ukuqhuba iTrafikhi kunye nokuDala ukuQaphela
Ukufumana umxholo olungileyo phambi kwabaphulaphuli abafanelekileyo -Njengoko usenokuba uvile, umxholo uyinkosi kwaye kakhulu kunjalo, ngakumbi nge-SaaS. Abasebenzisi balindele ulwazi oluninzi ekubancedeni bathathe isigqibo sokuthenga kwaye balindele ukuba uphawu lwakho lube negunya eliphezulu. Ukuphuhlisa umxholo ofanelekileyo onomtsalane kunye nokugcina abathengi abanokubakho kubalulekile. Ungasebenzisa izixhobo ezinje ngeSpyfu kwaye UmCwangcisi wegama elingundoqo leGoogle ukumisela ukuba ngawaphi amagama aphambili, yintoni ekujongwa ngabaphulaphuli bakho. Iindlela ezimbalwa zokwabelana ngomxholo wakho njengeposti yeendwendwe kwenye ibhlog enabaphulaphuli abafanayo, kusetyenziswa amaqonga anje phakathi kunye nokupapashwa, kunye nokusebenzisa iintengiso kunye nokunyusa ukufikelela phambi kwabaphulaphuli abafanelekileyo.
Sebenzisa ukuKhangela ngobuNtu Isicwangciso sokukhula esingahoywanga kaninzi sisebenzisa uphawu lobuqu lwabaseki bakho kunye neengcali kwiqela lakho ukufikelela kubaphulaphuli. Abantu bayathanda ukunxibelelana kunye nokufunda kubantu bokwenyani abakwi-Intanethi. Ukuba umntu ovela kwiqela lakho unesakhono okanye ubuchule obunokubonelela ngolwazi oluncedo, yindlela entle yokunyusa uphawu lwakho ngokungaqondanga nangokunyanisekileyo. Baninzi abasunguli ababhalayo kwi-Medium, Quora, abanye banoluhlu lwebhlog zabo okanye ii-podcast ezibonelela ngengqondo eninzi ukuba abaphulaphuli bakho baya kuba nomdla kuyo. Yakha ukuthembana, ukuthembeka, kunye nonxibelelwano lomntu kuhlobo lwakho. Ukwabelana nje ngento oyaziyo kunye namava onawo kunokukunceda ufikelele kwaye ubandakanye abaphulaphuli ojolise kubo.
Ukubonelela ngesixhobo sasimahla okanye isixhobo Isicwangciso esiliqili sokukhula kukubonelela ngesixhobo sasimahla okanye isibonelelo kwiwebhusayithi yakho etsala umthengi ekujolise kuye kwaye uqhubeke ubabuyise kwaye unike uphawu lwakho igunya. Ishedyuli yenze umsebenzi olungileyo ngokwenyani ngokwenzaIshedyuli yokuHlaziya izihloko eziphambili evumela ukuba uhlalutye umxholo weposti yebhlog ngqo kwindawo yabo. Ukutshintshiselana, bacela i-imeyile yakho. Isicazululi sentloko senza ingqiqo efanelekileyo kubaphulaphuli babo. Unokwenza isixhobo esinjengalesi kubaphulaphuli bakho ekujolise kubo ukuba basisebenzise okanye unokwenza into elula njengokubonelela ngesikhokelo sendlela yokwenza into ngokutshintsha i-imeyile yabo.
Izixhobo zokwenza intengiso -Zininzi izixhobo onokuzisebenzisa eziza kukunceda wandise indlela oyila ngayo kunye nentengiso. Ungasebenzisa Ukubhalisa ukuphinda ujonge abasebenzisi abaza kwindawo yakho kudala emva kokuba beshiye indawo yakho. Ngaphezulu kwe-90% yabasebenzisi abaza kwindawo yakho abanokuthi bangabhampi bangaze baphinde babuye. Ukujolisa kubo kujolise kubo ngentengiso kwenye indawo ngesibonelelo esithile somdla wabo kwindawo yakho. Ukuba bajonge iipakeji zepremiyamu, u-Adroll uya kujolisa kubo ngentengiso yesaphulelo seprimiyamu kwaye abuyise. Ngokukodwa kwinto efana ne-SaaS, kuthatha isigqibo esincinci sokuthatha isigqibo. Inxalenye enkulu yomzamo wakho iya kuba kukugcina phambili kwengqondo yomthengi onokubakho kwaye kubuyise izikhokelo.
Ukubhabha kunye nokuNciphisa iChurn
Phucula inkqubela phambili yakho ebhodini ngenkqubela phambili yebha kunye nezinto zentlalo -Icandelo elikhulu lokugcina ukukhula ngaxeshanye linciphisa i-churn ngelixa ubhalisa abasebenzisi abatsha. Ukuba utyikitya abasebenzisi kodwa ipesenti enkulu iyehla kwinyanga yokuqala, awukhuli kwaphela. Le yingxaki enkulu kwiinkampani ze-SaaS. Ukuthintela i-churn, qiniseka ukuba abasebenzisi bayayazi kakuhle imveliso yakho kwasekuqaleni. Indlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba abasebenzisi bahamba kuwo onke amanyathelo anokwenzeka enkqubo yokukhwela kunye nokuwagcina kuzo zonke "izifundo" kukubandakanya uluhlu lokutshekisha okanye ibha yenkqubela phambili. Xa abasebenzisi bekubona oku, kunokwenzeka kakhulu ukuba bayigqibe yonke le nkqubo kwaye bangaphoswa lulwazi olubalulekileyo. Ukuba unako, faka izinto zentlalo njengokongeza abahlobo okanye osebenza nabo Ukuzibandakanya okungakumbi ekuhlaleni, ngakumbi abasebenzisi banokubuyela kwaye baqale ukusebenzisa amanqaku kunye kwangoko.Funda nzulu malunga nokuphucula inkqubo yokungena.
Bandakanya abasebenzisi abatsha nababuya nembuyekezo -Ufuna ukugcina abasebenzisi kunye nabasebenzisi abanokubakho kwiluphu ngokubhengeza ngempumelelo uhlaziyo kunye neempawu ezintsha ukubonisa ukuba iqela lakho lisebenza nzima ukuphucula imveliso yakho. Yakha ukuthembela kwi-brand yakho kwaye igcina ukuthembeka komsebenzisi xa bekubona ubonelela ngento abayicelileyo. Zama i-Beamer kwindawo yakho okanye kwi-app yakho. I-Beamer yitshintsho kunye neendaba ezivulwayo xa abasebenzisi becofa indawo ethi "Yintoni eNtsha" kwindlela yakho yokuhamba okanye i-icon kuhlelo lwakho lokusebenza. Umjelo webarbar esecaleni yohlaziyo ivula ngokwangoku: amanqaku amatsha, ukujongana, uhlaziyo, iindaba, umxholo, njl.njl. Yindawo ephambili apho unokuhlaziya wonke umntu. Ungasebenzisa izaziso zokutyhala ukufikelela kubasebenzisi kwisiza sakho okanye usetyenziso kwaye ubabuyise ngohlaziyo olunomdla. Yindlela elungileyo yokunyusa ukubandakanyeka, ukunciphisa ubuqhetseba, kunye nokugcina abo "basemaphethelweni" abathengi abanokubuyela.
Ingxelo kunye nokuThengiswa koontanga
Ukuqokelela ingxelo -Ukwenza iimveliso ze-SaaS eziwinayo yinkqubo yokumamela abathengi kunye nokulungelelanisa. Yenze inqaku ngempumelelo kwaye rhoqo ukuqokelela ingxelo evela kubasebenzisi kuwo onke amabakala. Zininzi izixhobo ezinokukunceda kuvavanyo lwe-imbed kunye nokukalwa ngokukhawuleza kwiwebhusayithi yakho kunye nokusetyenziswa ukuze uqokelele ingxelo elula. Ungasebenzisa iBeamer ukuqokelela ingxelo: abasebenzisi banokushiya iimpendulo zabo kunye nezimvo kuhlaziyo lwakho lwamva nje kwisondlo sakho ukuze ukwazi ukulinganisa iimpendulo. Ukuqokelela ingxelo kunye nokuyisebenzisa kuhlaziyo kunye neempawu ezintsha kuqinisekisa ukuba imveliso yakho iguquka ngokuchanekileyo.
Ukukhuthaza ukwabelana ngemveliso yakho -Ukufikelela kubaphulaphuli ekujoliswe kubo njengabathengi bakho bangoku, indlela elula kukukhuthaza kwaye wenze kube lula kubo ukuba babelane ngemveliso yakho. Unokucela abasebenzisi ukuba bameme abasebenzisi abaninzi ngokutshintshisa ngento ethile. Ekuqaleni, iDropbox ikubuze ukuba wabelane ngesixhumanisi sabo nabantu aba-5 okanye abali-10 kwaye ufumane indawo yokugcina eyongezelelweyo kwiDropbox ngokutshintshiselana. Yayimpumelelo enkulu. Yenza kube lula ukwabelana ngemveliso yakho kwimidiya yoluntu okanye nge-imeyile. Uninzi lwabasebenzisi luya kwenza njalo ngakumbi ukuba lukhuthazwa yipherk njengenqaku elongezelelweyo (indawo yokugcina yeDropbox), uvavanyo olwandisiweyo, okanye isaphulelo.
Iinkqubo zokuthengisa ezithunyelwayo -Indlela elula yokwenene yokungena phambi kwabasebenzisi abaninzi njengabasebenzisi bakho bangoku kukusebenzisa abasebenzisi bakho bangoku njengabameli begama lakho ngeenkqubo zokuthengisa ezithunyelwayo. Kukho izixhobo ezifanaUkuhanjiswa kweCandy oko kunokukunceda ukuba usete ngokulula inkqubo yokuhambisa imveliso yakho kunye nabasebenzisi bakho bangoku kunye nabathandi bakuncede uthengise ngelixa bekwazuza. Ubungqina boluntu kunye nokuphononongwa koontanga kunamandla; amazwi abo anamandla kunawakho! Unokude unikezele ngokubonelela ngokudluliselwa kwakho kunye namahlakani ngomxholo kunye nezinto zokunceda ukuthengisa ngcono imveliso yakho. Amathuba alungile ngokwenene sele benofikelelo kubaphulaphuli ekujoliswe kubo. Baya kunxibelelana nabo ngendlela ethembekileyo nenenyani ngakumbi emva koko unokwenza ngeentengiso.
Naziphi na kwezi kulula kakhulu ukuzisebenzisa nje ezimbalwa ezinokukunceda ukukhulisa ukukhula kwakho ngokukhawuleza okukhulu ngo-2019. Banike ifoto kwaye ubenze badibanise abaphulaphuli bakho kunye neenjongo zakho. Ukongeza, zama i-Beamer njengendlela elula yokwenyusa ukubandakanyeka kwindawo yakho kunye nokunxibelelana okungcono kunye nokufakwa okunokubakho kunye nabathengi bangoku.
tags: izixhobo zokwenza intengisoumqadiUkuThengiswa kweMpahlaIshedyuli yokuhlaziya umxholoizixhobo zasimahlaukukhulaukukhwelaukunciphisa i-saas churnukuthengisa ukuthunyelwaii-saasukufumanaukugcinwa kwe-saasisoftware njengenkonzo
UChloe Smith ngumcebisi kwezeshishini kunye nombhali osisigxina osoloko ekulungele ukwabelana ngeengcebiso. Ukholelwa ukuba uthando, isibindi kwaye, ngaphezu kwako konke, ulwazi luzala impumelelo. Xa engasebenzi, kunokwenzeka ukuba kwenye indawo waqunjelwa yincwadi elungileyo, kunye nekomityi yeti ye-lemongrass (okanye ukubukela ngokuthembekileyo ukubukela eyona show intsha yeNetflix).